XOG:- Dowladda oo is hor istaag ku sameysay Shir ay yeelan lahaayeen Odayaasha Beelaha Muqdisho - Awdinle Online
Home News XOG:- Dowladda oo is hor istaag ku sameysay Shir ay yeelan lahaayeen...
XOG:- Dowladda oo is hor istaag ku sameysay Shir ay yeelan lahaayeen Odayaasha Beelaha Muqdisho
Warar la helayo ayaa sheegaya dowladda fedraalka Soomaaliya in ay is hor istaag ku sameysay Shirweyne magaalada Muqdisho ay ku yeelan lahaayeen Odayaasha Dhqanka Beelaha Hawiye.
Qaar ka mid ah Odayaasha qaban-qaabinayay Shirka ayaa sheegay in hay’adaha amniga ay ku wargeliyeen markii hore hase’ahate lagu amray in aysan qaban Karin shirweynahaas.
Shirka oo ka dhici lahaa mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho waxaa lagu casuumay in ka badan 300,oo Erga ah una badan Odayaasha beelaha dega magaalada Muqdisho.
Dhinaca kalana Odayaasha ayaa sheegay in qaban doonaan shirkaas,maadaama markii hore ay la wadaageen dowladda,islamarkaana ay hay’adaha amnigu ka hor istaageen iyaga oo si cad ugu sheegay in aysan qaban Karin,balse ay ku adkeysteen in ay qabtaan Shirka.
Dhawaan ayay aheyd markii ciidamo ka tirsan NISA ay joojiyeen xaflad taageero loogu muujinayay Musharax madaxweyne Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow,isaga oo falkaas ku tilmaamay mid baal marsan dowladdanimada.
Previous articleLaba Askari oo lagu toogtay Muqdisho & faah faahin kasoo baxeeysa
Next articleShabaab oo soo bandhigay Sawirada Qalabka Idaacada Al-furqaan oo Duqeyn lagu bur-buriyay